ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - GamesMixie
http မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်://www.gamesmixie.com/ (အဆိုပါ “ဆိုက်ကို”).ကျနော်တို့ privacy ကိုအွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကို၏အသုံးပြုသူများအဖို့အရေးကြီးတယ်ကြောင်းနားလည်, business.This ကြေညာချက်ပို့ချဆိုက်၏ရှိသူများသည်အသုံးပြုသူများမှလေးစားမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒများအုပ်ချုပ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ (“ဧည့်သည်များ”) ဆိုက်ပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်မည်နှင့် http ကကမ်းလှမ်းအမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုကိုအောင်မှတ်ပုံတင်ရန်သူကိုစီးပွားရေးနှင့်ဧည့်သည်များလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသွားရောက်ကြည့်ရှုသူကို://www.gamesmixie.com/ (စုပေါင်း, “န်ဆောင်မှုများ”) (“Authorized Customer များ”).”ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး” သတ်မှတ်သို့မဟုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရည်ညွှန်းသည်, ထိတှေ့, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များနှငျ့သရသောလူတစ်ဦး၏တည်နေရာကို, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, နာမတျောကို, လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်, ဖက်စ်အရေအတွက်ကို, အီးမေးလိပ်စာ, ဘဏ္ဍာရေး profile များကို, လူမှုဖူလုံရေးကိုယ်ပိုင်နံပါတ်, နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်. ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးအမည်ဝှက်စုဆောင်းကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များမပါဝင်ပါ (သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ) တစ်ခုဖော်ထုတ် individual.What ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းနေသည်မှချိတ်ဆက်မသို့မဟုတ်လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များအပေါငျးတို့သထံမှအခြေခံအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမည်အကြောင်း. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Authorized Customer များအနေဖြင့်အောက်ပါအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်း: အမည်များ, လိပ်စာများ, ဖုန်းနံပါတ်နှင့်စာရေးဆရာ Customer များ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏သဘောသဘာဝနှင့်အရွယ်အစား, အဆိုပါ Authorized ဖောက်သည်ဝယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားသို့မဟုတ် sell.What အဖွဲ့အစည်းများသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသောကြော်ငြာစာရင်းနှင့်သဘောသဘာဝများနှင့်အရွယ်အစား? သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်စုဆောင်းမှုအပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသူ (ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်, ခွဲ clearinghouses နှင့်ဘဏ်များ) သူကိုခရက်ဒစ်ကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများပေးစေခြင်းငှါ, အာမခံ, နှင့်အာမခံငွေန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်ဤအချက်အလက်စုဆောင်းစေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့ကဤတတိယပါတီများထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်သူတို့အဖို့ထောက်ပံ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုဘယ်လိုထုတ်ဖော်ရန်သူတို့ကိုမမေးကြဘူး. ဤတတိယပါတီတချို့ကဖြန့်ဖြူးကွင်းဆက်အတွက်လင့်များအဖြစ်တစ်ခုတည်းကိုသာပြုမူကြောင်းကြားခံဖြစ်နိုင်သည်, သိမ်းဆည်းကြဘူး, လက်ရှိထား, သို့မဟုတ် them.How အားပေးပြီးမှသတင်းအချက်အလက်များဆိုက်အသုံးပြုမှုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်မကိုသုံးပါ?ကျနော်တို့ဆိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ, သင့်လျော်သောဝန်ဆောင်မှုဟာယယဇ်ပူဇော်စေ, နှင့်ဆိုက်ကိုအပေါ်တောင်းဆိုမှုများကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်းဖြည့်ဆည်းရန်. ကျနော်တို့သုတေသနသို့မဟုတ်ဝယ်ယူအကြောင်းကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့်စာရေးဆရာဖောက်သည်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်ဆိုက်များ၏ဘာသာရပ်ကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်သောဆိုက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခွင့်အလမ်းများကိုရောင်းချစေခြင်းငှါ. ငါတို့သည်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များဆက်သွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးသုံးနိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်ပေး. ဘယ်သူတွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်မျှဝေစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်?Authorized Customer များနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်သည်အခြား Authorized Customer များနှင့်အတူအလားအလာအရောင်းအအကဲဖြတ်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုအခြားအ Authorized Customer များနှင့်အတူမျှဝေစေခြင်းငှါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များအကြောင်းကိုစုစည်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်, ငါတို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏အသက်အပိုင်းအခြားနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအပါအဝင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်အေဂျင်စီများနှင့်တတိယပါတီရောင်းချသူနှင့်အတူ. ငါတို့သည်လည်းအခွင့်အလမ်းအားပူဇော် “ဘေးဖယ်နေသည်” သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ငါတို့အားဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်မဆိုအေဂျင်စီကဆက်သွယ်မေးမြန်းခံရ. ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးကဘယ်လိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်?http နေဖြင့်စုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်://www.gamesmixie.com/ လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းထားနှင့် http ၏တတိယပါတီများမှသို့မဟုတ်န်ထမ်းမှမရယူနိုင်ဖြစ်ပါသည်://အထက်တွင်ညွှန်ပြအဖြစ်အသုံးပြုရန် မှလွဲ. www.gamesmixie.com/. စုဆောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ဧည့်သည်များမှမရရှိနိုင်ပါကဘာလဲရွေးချယ်မှုများမှာ, သုံးပါနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေ?ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်မလိုလားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိထဲကရွေးချယ်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားထားအဖြစ်အီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်အားဖြင့်ငါတို့ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းချသူနှင့်တွဲဖက်အေဂျင်စီများကဆက်သွယ်မေးမြန်းခံရ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် [လိပ်စာ] ကွတ်ကီးဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုကြသည်?ကွတ်ကီးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုကြသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များ၏ဦးစားပေးနှင့်သူတို့ကို select ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ. ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Authorized Customer များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကွတ်ကီးကိုသုံးပါ. ဥပမာ, တစ်ဦး Authorized ဖောက်သည်အပေါ် logged နှင့်ဆိုက်ထက်ပိုမိုများအတွက်အသုံးမပြုဖြစ်ပါသည်လျှင် 10 မိနစ်, ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုအလျှောက်ကို http မ off.How အာဏာပိုင်များဖောက်သည် log ပါလိမ့်မယ်://www.gamesmixie.com/ အသုံးပြုမှုကို login သတင်းအချက်အလက်များ? http://www.gamesmixie.com/ login သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, IP လိပ်စာများ, ISP များသည်, နဲ့ browser အမျိုးအစားများ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်, ဆိုက်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံ, နှင့်ကျယ်ပြန့်လူဦးရေအချိုးအစား information.What မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစုဆောင်းထားတဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ဧည့်သည်များနှင့် / သို့မဟုတ် Authorized Customer များအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးခွင့်ရှိသည်? http://www.gamesmixie.com/ ထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အချင်းပြည့်မီဘို့ Authorized Customer များအကဲဖြတ်များအတွက်အခြေခံကိုသိရန်လိုအပ်အပေါ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ vendors.Such ရောင်းချသူတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူမိတ်ဖက်များနှင့်အခြားဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုထဲသို့မဝင်ရဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကဤအချက်အလက်များ၏၎င်းတို့၏စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုမဖုံး. ဥပဒေနှင့်အလိုက်နာရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်. ကျနော်တို့ကတရားရုံးအမိန့်သို့မဟုတ်ဆင့်ခေါ်စာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိမယ့်ဥပဒေအေဂျင်စီထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုနှင့်အတူလိုက်နာနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်. ပြီးမှငါတို့ဧည့်သည်များနှင့် Authorized ဖောက်သည်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လိုအပ်သောငါတို့သည်လည်းကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်. ဘယ်လိုဆိုက်ကို secure ခွဲခြားသိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစောင့်ရှောက်စေပါဘူး?ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်အလေ့အကျင့်တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးသတင်းအချက်အလက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အတွက်စကားဝှက်ပေးထားကြသူအရည်အချင်းပြည့်မီန်ထမ်းတစ်ဦးကန့်သတ်အရေအတွက်သာသုံးစွဲနိုင်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ပုံမှန်ပေါ်မှာငါတို့လုံခြုံရေးစနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ audit. အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်များ, ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များသို့မဟုတ်လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်များကိုအဖြစ်, encryption ကို protocol များဖြင့်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, အင်တာနက်ကိုကျော်ကိုစေလွှတ်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရာအရပျထဲမှာ. ကျွန်တော်တစ်ဦးလုံခြုံ site ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီးပွားဖြစ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဆောင်ရွက်မှုများယူနေစဉ်, အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် databases ကိုအမှားအယွင်းများမှဘာသာရပ်များမှာ, လက်ကမြင်းခြင်းနှင့် Break-ins, ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များရာအရပျယူလိမျ့မညျမဟုကျွန်ုပ်တို့မဆိုဤကဲ့သို့သောကွိများအတွက်ဧည့်သည်များသို့မဟုတ် Authorized Customer များခံထိုက်ပေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံသို့မဟုတ်ခိုင်လုံနိုင်ဘူး. ဘယ်လိုဧည့်သည်များပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်အတွက်မဆိုတိပြင်ပေးလို့ရပါတယ်?ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်သူတို့အားအကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး update လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်မည်သည့်တိပြင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါစေခြင်းငှါ. တစ်ဦးဧည့်သည်ဆိုက်ကစုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေး delete သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်သလား?ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဆိုက်ရဲ့ဒေတာဘေ့စကနေကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး deactivate / ပယ်ဖျက်ဖို့တစ်ယန္တရားနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့် Authorized ဖောက်သည်များကို . သို့သျောလညျး, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျက်ခြင်း၏ Backup တွေကိုနှင့်မှတ်တမ်းများ, အချို့ကျန်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆက်ပြီးမရှိဘဲဧည့်သည်ရဲ့ entry ကိုဖျက်ပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်. ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးပိတ်ပြီးရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူတစ်ဦးချင်းဤအချက်အလက် function ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့ရောင်းချမည်မဟုတ်, လွှဲပြောင်း, သို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားမဆိုလမ်းထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စပ်လျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ. အဘယ်အရာကိုသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအပြောင်းအလဲများလျှင်ဖြစ်ပျက်?ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များဆိုက်ပေါ်မှာဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေပို့စ်တင်ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးပါလိမ့်မယ်. သို့သျောလညျး, ကျွန်တော်တစ်ဦးထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်လျှင်ဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ယခင်ကထုတ်ဖော်မရမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ, အဲဒီလိုဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ခွင့်ပြုထိုကဲ့သို့သောဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်. links:http://www.gamesmixie.com/ တခြား web site တွေဆီသို့လင့်များပါရှိသည်. သင်တို့သည်ဤလင့်ခ်တစ်ခုပေါ်တွင် click လုပ်သည့်အခါကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, သင်သည်အခြား web site ကိုမှရွေ့လျားနေကြသည်. ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒများငါတို့ဥစ်စာထဲကနေကွာခြားစေခြင်းငှါဤဆက်နွယ်နေဆိုဒ်များတွေရဲ့ privacy ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့သငျသညျအားပေး.
မည်သည့် tools များ / files တွေကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာသုံးပါ, http://www.gamesmixie.com/ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဤနေရာတွင်ရေးကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အခြား devices ပြုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြုမဆိုထိခိုက်မှုများအတွက်တာဝန်မယူ. ဤနေရာတွင် Tools များသို့မဟုတ်မ may အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, သူတို့မကျင့်လျှင်ကျနော်တို့ထိုက်ကျင်းပမရနိုငျ.
အားလုံး cheat နှင့် Hack နောက်ဆုံး Checked:
သင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက်ခန့်မှန်းခြေကို download speed ကို:
62566 ဘို့ ဟုတ်သည်
36 ဘို့ NO
Die ရန်ရယူနိုင်သော2hack – Unlimited ငွေ Hack 2017
ဒစ္စနေးကို Magic ဒမ်း cheat – ကို Hack Unlimited ကျောက်မျက်ရတနာပြီးတော့ကို Magic
လိဂ်ဘောလုံးအကြွေစေ့ Cheat Dream – Unlimited ဒင်္ဂါးပြား Hack 
ပင်လယ်ဓားပြဓမ္မရာဇဝင် Hack – Unlimited ဗိုင်းငင်ပြီးငွေ
ဘာသာရေး Messenger ကို Hourglass ကို Hack cheat – အဘယ်သူမျှမစစ်တမ်းအခမဲ့ 